Meetni Nama Harka Jiru Dhagaa Fakkaata « QEERROO
June 9, 2012 By Qeerroo in Oduu/News	2 Comments
Malkaa Caffee irraa* | Waxabajjii 2012
Qabsoon Bilisummaa Oromoo kan dhiigaa-lafee fi lubbuu gootota Oromoo kumootaan utubame bu’uurri isaa akka jabaa gadi dhaabbatee jira. Bu’uura kana jabeessanii tikfachuudhaan achi irratti waan hafe ijaaruu qofaatu guyyaa bilisummaa ummata keenyaa dhiheessa. Waan akka Sabaatti dhabne sana argachuuf mala/daandii haaraya barbaaduunis hammeenya hin qabu. Waan haaraya tokko gadi dhaabuuf bu’ura amma jiru kana diiguu barbaachisa yaadni jedhu yoo jiraate garuu, dogoggora seenaa guddaa dha. “Isa Mukaan Fuudhaatti, Isa Ukaa Buufti.” inni jedhamu (mammaaksi abbootii keenyaa) sun nu mudachuu waan danda’uuf. Maaliifin kana kaase?
Ebal 21 bara 2012 irraa eegalee namoota dhimma QBOtu nu yaachise jedhaniin mariin dhimma kana irratti xiyyeeffate deemaa jira wanti jedhu oduu ow’ituu dhiheenya kanaa ti. Sanuma ilaalchisee yaadotni “Adeemsaa fi akeekni marii kanaa kan QBOf tolu osoo hin taane faallaa kanaa ti.” jedhanii dura dhaabbachuudhaan bifa shakkii, mormii, komii, qeeqaa … fi kkf. media adda addaa irratti daddarbatamaa jiraachuunis waan jiraa ti. MeetniNamaHarkaJiruDhagaaFakkaata
« Qeerroon University Jimmaa, Walleelee Warraaqsaan Halkan Guutuu Mooraa Howwisuun Wayyaanee Garaa Guban.	Caayaa ABO Si Jalattan Dheessa….. »
2 Responses	h/galchu says:	June 9, 2012 at 12:01 pm	Yaa Obboleeyan koo Jabadha jajjabadhaa isiiniin jedhaa Anis Bakka jiruu irraa!!!”
Reply	obsaa says:	June 9, 2012 at 12:14 pm	Dhimmi guddaan injifannoo hanga ammaa argame tikfachuun injifannoo kana caaluuf qabsaa’uu dha. Dhaaba diddiiganii ijaaruun kisaaraa qabaachuu mala.Kanaaf dhaaba keenya bakkuma jirutti jabeessuu furmaata filatamaa dha.